Yintoni Allstate SIPP intlawulo? | XperimentalHamid
Ngaba ukhe wafumana idiphozithi enenkcazo ye-Allstate SIPP intlawulo? Iindaba ezimnandi ziyinkqubo ebuyayo eyaziswe nguAllstate. Siza kuthetha nge “Ukuhlawulwa kwesipp Allstate”Ngokweenkcukacha kweli nqaku.
Iindaba ezimnandi: Uhlawulwa kuzo zonke ii-Allstates ngenkqubo yazo yokuhlawula ye-SIPP
Yintoni uSIPP ngu-Allstate?
Ngaba uya kuhlawulelwa kwii-Allstates ngentlawulo yokuhlawula?
Yintoni ngokwenene isicwangciso sokuhlawulwa kweSIPP esaziswa nguAllstates?
I-SIPP sisishwankathelo Indawo yokuhlala ekuhlawulelwa kuyo.
Njengokuba abantu abancinci beqhuba ngenxa ye-covid 19 kuya kubakho iingozi ezimbalwa ngenxa yoko zonke ii-allstates zizise I-sipp intlawulo.
Zonke i-SIPP zentlawulo
EWE. Nasi ingxelo esisemthethweni esivela ku-Allstate malunga nesicwangciso sentlawulo.
Ukuqhuba kancinci = iingozi ezimbalwa.
Ke sidale uShelter-in-Indawo Payback: isicwangciso sokubuya ngaphezulu kweedola ezingama-600 ezigidi kubathengi bezithuthi zeAllstate.
Oku kuthetha ukuba unedipozithi kwiiakhawunti zakho ngesicwangciso sentlawulo ye-SIPP.
YET ezinye iindaba ezilungileyo: Abamkeli bokhuseleko lwentlalo baya kuhlawulwa ngokuzenzekelayo
Ukufakwa kwe-Shelter-in-place place kuthetha ukuba bambalwa abantu abahamba ezindleleni kunye neengozi ezimbalwa. Ngenxa yokuncipha, abathengi beinshurensi yemoto baya kufumana iipesenti ezilishumi elinesihlanu, ngokuxhomekeka kwiipremiyamu zabo zenyanga ngo-Epreli nangoMeyi.
I-Allstate iya kuthi ngokuzenzekelayo ibeke imali ebhankini okanye kwikhadi letyala kwifayile, ifake isicelo sokuthenga ngetyala kwisiteyitimenti sakho esilandelayo, okanye ikhuphe itsheki, kuxhomekeke kukhetho lwakho lokuhlawula. Nceda ujonge ulwazi lwakho lokuhlawula ukuze uqiniseke ukuba lukhona.
Iintlawulo zeShelter-in-Place Payback ziya kwenzeka ngeenyanga zikaMeyi nangoJuni kubathengi beinshurensi yemoto.
Abathengi banokufumana iintlawulo ngokukhawuleza kwaye bajonge iinkcukacha zokuhlawula ngo-Epreli kwi-Allstate Mobile App. Njengisikhumbuzo, ulwazi lokuhlawula akufuneki lubonelelwe kumaqela angaphandle.
Umyeni wam uyafudumala Ibhedi Isahluko 71 - 85 simahla kwi-intanethi
Abamkeli boKhuseleko loLuntu bayifumana nini i-Stimulus?